Xildhibaan Mahad Salaad oo ka jawabay farmaajo ee xalay saqdhexe. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xildhibaan Mahad Salaad oo ka jawabay farmaajo ee xalay saqdhexe.
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka, gaar ahaan kuwa mucaaradka ayaa ka fal-celiyey khudbadii uu xalay jeediyey madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday, isaga oo kusoo koobay illaa 5 qodob.
Mahad Salaad ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha uusan khudbaddiisa kusoo hadal qaadin dhibaatada ka taagan magaalada Muqdisho iyo qalalaasaha siyaasadeed ee dalka.
Sidoo kale wuxuu intaasi kusii daray in ujeedka Farmaajo uu ahaa ii dheh siyaasadeed oo uu waqti ku iibsanayo, sida uu hadalka u dhigay.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa sidoo kale ugu baaqay xubnaha mucaaradka inay heegan ku sii jiraan, inta laga hubinayo in dalku aaday doorashooyin madax banaan.
1.	Sooma hadalqaadin ku darsigii xaaraanta ahaa iyo xukun boobkii uu ku kacay 12-kii bishan Abriil 2021.
2.	Kama garaabin, umana tacsiyeen shacabkii dhiigooda uu daadiyay, guryahoodana ka barakiciyay iyadoo bil Ramadaan lagu jiro.
3.	Wuxuu iska indhotiray fidnada uu ka dhex abuuray ciidamada qalabka, isagoo kala qaybiyay kadibna qoryo isugu dhiibay. Mana jiro maanta askari askari kale aaminaya iyo sarkaal laga amar qaadanayo, qof walibana wuxuu miciin bidday qorigiisa iyo qabiilkiisa.
4.	Sidoo kale ma sheegin sida xal loogu heli karo ismariwaaga siyaasadeed ee maanta taagan, kumana baaqin wadatashi iyo dib-u-heshiisiin siyaasadeed oo dalka lagu samatabixinayo.
5.	Isku soo wada duuboo ujeedka Farmaajo wuxuu ahaa ii dheh siyaasadeed uu waqti ku iibsanayo si uu diyaar garoobo isla markaasna isaga yareeyo cadaadiska ciidan ee dulsaaran iyo goodiska beesha caalamka ku hayso.
Previous articleRa’iisul wasaare Rooble oo shacabka Muqdisho ugu baaqay in ay ku soo laabtaan Guryahooda farina u diray Ciidamada ammaanka.
Next articleHogamiye C/raxmaan C/shakur oo sheegay in xalay fursad uu shacabka Soomaaliyeed ku macsalaameeyo ay dhaaftay Farmaajo
Laba nin oo u dhashay dalka Ruushka oo looga shakisan yahay...
Laba nin oo u dhashay dalka Ruushka oo looga shakisan yahay in Salisbury ay sanadkii 2018 ku sumeeyeen Sergei Skripal oo ka tirsanaan jiray...
Qaramada Midoobay oo kulan deg deg ah kaleh Arimaha Murugsan ee...
Trump oo saacadaha ugu dambeeya ee madaxtinimadiisa cafis u fidiyay dad...
Suudaan oo xaalad deg deg ah uga dhawaaqday galbeedka gobolka Darfur
Maxoow ka yiri Musharax Cabdirmaan Cabdishakuur Dagaalkii Balad xaawe
Paul Alexander waa mid ka mid ah dadka ka badbaaday cudurkii...
Wasiir Ahmed Fiqi Biliqa ka weyn maa jirta Kursiga Dalka oo...